Vehivavy Hongroà Voasazy HAndoa Onitra Fa Nanoratra Momba Ny Fandaniam-bola Ataon’ny Fanjakana Tao Amin’ny Facebook · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2015 2:26 GMT
Araka ny lazain'ny tranonkalam-baovao 444.hu, ny lahatsoratra voalaza ho fototra niaingàna dia hoe nivarotra ampahany tamin'ny tranony ny governemanta tao an-toerana, taty aoriana anefa dia nandoa vola be ho hofan'izy io ihany, tamin'ny fanosohana hevitra momba ny mety ho fisian'ny kolikoly teo amin'ny governemanta sy ny tompony amin'izao fotoana izao. Namoahan'ny fitsarana lamandy nitentina 175 dolara Amerikana aloha i Maria Somogyi noho ny fanalàna baràka, ary taorian'ny fampakàrana didy nataony, nahena ho 35 dolara ilay sazy ara-bola. Tsy maintsy mandoa ny lany tamin'ny fitsaràna ihany koa i Somogyi. Araka ny lazain'i tranonkalam-baovao Index.hu, hitentina manakaiky ny 260 dolara amerikana io.
Tamin'ny 2013, ny tranonkalam-baovao mpanao fanadihadiana Atlatszo.hu dia nitaky ny tsy fanaovana ny fanalàna baràka ho heloka bevava ao Hongria. Ny lalàna manameloka dia sady mbola amperinasa, no nohararaotina taminà vanim-potoana samihafa mba hanakombonana ny vavan'ireo mpanakiana. Nanomboka fanentanana iray miainga avy eny ifotony ho fanohanana an'i Maria Somogyi ny Fikambanana Hongroà Ho an'ny Fahalalahana Sivily (HCLU).
Nandefa fampiasa iray ihany koa ny HCLU, izay mamoaka sary mahatsikaiky amin'ny alàlan'ny fanafangaroana ny sarin'ireo Hongroà mpanao politika aminà fitanisàna avy amin'ireo mpanao gazety sy mpanoratra, toy ilay iray etsy ambony. Natao hozarain'ireo mpanohana ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty media sosialy ilay sary. Azon'ny olona atao koa ny mizara ny heviny ivelan'ny aterineto. Ho ampahany amin'ny fanentanana “PolitiKuss” ataony, manangona ireo fanehoankevitra voasoratry ny olona tao Budapest ny Alatsinainy 9 Novambra 2015 ny HCLU.